Banyere Anyị - Xuzhou Kanfur Electronic Technology Co., Ltd.
Tọrọ ntọala na March 2012, Xuzhou Kanfur Electronic Technology Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke hi-tech nke na-etinye ọnụ R & D, imewe, Innovation, mmepụta na ahịa dị na China Mining University Science Park na Xuzhou. Na mbido ntọala ụlọ ọrụ ahụ, ngwaọrụ ahụike, nrụzigharị na ngwaahịa ahụike dịka usoro mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ nwere ndị ọrụ R & D ndị ọkachamara na nke kwụsiri ike, NA-ahụ maka R & D isi teknụzụ na nkà na ụzụ na nhazi na teknụzụ dị elu, na ndị R & D nwere ike siri ike na ike nyocha sayensị, ngwaahịa niile anyị na-ere bụ onwe ha. ndị otu R & D anyị mepụtara ma nwee ikike nwere ọgụgụ isi zuru oke.
Companylọ ọrụ ahụ enwetabeghị nsọpụrụ nke "ụlọ ọrụ sayensị na nke obere na nke ọkara", kamakwa gafere "Asambodo Ọdịmma Njirimara Njikwa Ihe Ọmụma", ngwaahịa ụlọ ọrụ gafere asambodo European Union CE, asambodo FCC, asambodo ISET. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ ụdị ihe karịrị ụdị ngwaahịa 20 dị na ahịa, nke nwere disinfection na ọrụ nsị nke isi ngwaahịa bụ oriọna ịgba ọgwụ mgbochi ultraviolet, ihe nchọpụta gburugburu ebe obibi nwere ngwa nchọpụta formaldehyde, onye na-emepụta intravenous, onye na-ahụ maka ime ụlọ sauna. Companylọ ọrụ ahụ na-adaberekwa na R & D nke aka ya, mmepụta na uru ndị ọzọ na-emepụta ngwa ahịa, maka Europe, North America, South Asia na ahịa ndị ọzọ iji nye ngwaahịa, merie ntụkwasị obi nke ndị ọrụ.
Companylọ ọrụ anyị nwekwara ikike nyocha nke sayensị na nke siri ike, nleba anya na nyocha nke oge a yana usoro nnwale siri ike bụ nkwa ngwaahịa ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ. Ngwaahịa ụlọ ọrụ ahụ dabere n'ịdị mma dị mma, ahịa ahịa na-aga n'ihu na-abawanye, ahịa na-aga n'ihu na-eto. Companylọ ọrụ ahụ azụlitewo na teknụzụ na-emepụta teknụzụ nwere njirimara ọhụụ nke oge a. Companylọ ọrụ anyị na-agbaso ihe ọmụma mmepe ụlọ ọrụ nke "teknụzụ mbụ, nke mbụ", na-arụsi ọrụ ike na nke ọma na-etinye njikwa ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ, ma na-etinye aka na ịbụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-eduga. Ruo ogologo oge, ụlọ ọrụ ahụ etinyewo aka n'ịmepụta ihe ọhụrụ gbasara mkpa ndị ahịa, na-arụkọ ọrụ na ndị mmekọ na-emeghe, na-etinye aka n'inye usoro nhazi, ngwaahịa na ọrụ, yana ime ike ya niile iji mepụta uru kasịnụ maka ndị ahịa. N'oge a nke teknụzụ ọhụụ ọhụụ juputara na ohere, nsogbu na asọmpi, mmepe ụlọ ọrụ ga-akawanye mma. Anyị ga-aga n'ihu na-emeziwanye usoro njikwa, na-abawanye iwebata ndị ọrụ sayensị na teknụzụ, nyocha na mmepe nke ngwaahịa ọhụrụ na mmepe ahịa, iji nye nkwado siri ike maka nkwado ụlọ ọrụ na ngwa ngwa. Companylọ ọrụ ahụ ga-abụ ndị ahịa, na-akwalite mmepe ụlọ ọrụ na nkà na ụzụ ọhụrụ, ma gbalịsie ike iji nyere ụlọ ọrụ ahụ aka inye onyinye dị elu na ngwa ọgwụ, nrụzigharị na ahịa ahụike.
Na ezi mmepụta technology na echesinụ àgwà akara. Maka mgbawa ọ bụla, bọọdụ sekit ma ọ bụ akụkụ, Nkasi obi nwere ike ijikwa usoro ahụ dum site na nchekwa iji hụ na ngwaahịa ahụ kwụsiri ike. Ọzọkwa, nyocha dị mma tupu ịhapụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe bụ nkwa kachasị mma maka ogo dị elu.